सागमा जसले नेपालको शान बढाए (विस्तृत) | Kendrabindu Nepal Online News
२६ मंसिर २०७६, बिहीबार १६:०३
-काठमाडौं‍, २०७६ मंसिर २६ । नेपालले ऐतिहासिक सफलता हासिल गर्दै १३ औं दक्षिण एशियाली खेलकुद (साग) भव्यताका साथ सम्पन्न गरेको छ । नेपालले खेलको नतिजामा मात्रै सफलता हासिल गरेन, ठूला प्रतियोगिता आयोजना गर्न सक्षम छौं भन्ने उदाहरण पनि पेश गरेको छ। नेपाली खेलाडीले फुटबल, तेक्वान्दो, जुडो, कुस्ती, पौडी, साइक्लिङ, एथेलिटिक्स, ट्रायथलन, बक्सिङलगायतमा विधामा ऐतिहासिक स्वर्ण हासिल गरे ।
कूल ३१६ स्वर्णसहित एक हजार ६३ पदकका लागि भएको प्रतिस्पर्धामा भारतले १७३ स्वर्ण, ९३ रजत र ४५ कास्य जित्यो। नेपालले ५१ स्वर्ण, ६० रजत र ९५ कास्य जित्यो। ४० स्वर्ण, ८३ रजत र १२८ कास्यसहित श्रीलङ्काले तेस्रो स्थान प्राप्त गर्न सफल रह्यो भने पाकिस्तानले ३१ स्वर्ण, ४१ रजत र ५९ कास्य प्राप्त गर्न सफल भयो । प्रतियोगितामा बङ्गलादेशले १९ स्वर्ण, ३२ रजत र ८७ कास्य, माल्दिभ्सले १ स्वर्ण र ४ कास्य तथा भूटानले ७ रजत र १३ कास्य पदक जित्यो ।
सागमा स्वर्ण जित्ने ५१ खेलाडी का विस्तृत विवरण
कराँतेका स्टार मन्डेकाजी श्रेष्ठले १३औं सागमा नेपाललाई पहिलो स्वर्ण दिलाएका थिए । उनले कराँतेमा दुई स्वर्णको कीर्तिमान बनाउँदा एकल र टिम गरी दुवै कातामा स्वर्ण जिते। नेपालले कराँतेको व्यक्तिगत कातामा २० वर्षपछि स्वर्ण जितेको हो । २० वर्षपछि कातामा स्वर्ण जितेर इतिहास बनाउने उनी कराँतेमा एकै इभेन्टमा दुई स्वर्ण जित्ने एक्लो खेलाडी पनि हुन्। ३५ वर्षीय मण्डेकाजीले सागमा स्वर्ण जित्ने सपना पालेको भने ९ वर्ष पछि पुरा गरेको हो ।
२. महसुस तामाङ, मण्डेकाजी श्रेष्ठ, प्रविण मानन्धर, कराँते (टिम काता, पुरुष )
आठौँ संस्करणको काठमाडौँ सागमा भित्रिएको कराँतेको पदक दास्रो स्थानमा रहेको छ। यस पटक पनि नेपाली पुरुष टिम कातामा नेपाली टोलीका लागि महसुस तामाङ, मण्डेकाजी श्रेष्ठ, प्रविण मानन्धरले नेपाललाई स्वर्ण पदक दिलाएका छन् ।
३. कुसुम खड्का, कराँते (४५ केजी मूनि)
करातेको कुमुतेमा ४५ केजी तौल समूहमा कुसुम खड्काले स्वर्ण जितेकी हुन् । उनले बंगलादेशकी सेनारथलाई कुसुमले व्यक्तिगत स्वर्णको खाता खोलेकी थिइन् ।
४. निर्मला तामाङ, संगिता मगर, सरु कार्की– कराँते (टिम काता ,महिला)
नेपालको कराँतेमा मार्सल आर्ट्समा पनि भिन्नै शान रहेकोछ । आठौँ संस्करणको काठमाडौं सागमा भित्रिएको कराँतेको पदकले नेपालमा दोस्रो स्थानमा छ। यसपटक पनि नेपाली महिला टोलीले कराँतेमा आफू निकै बलियो भएको प्रमाण गर्दै टिम कातामा स्वर्ण जिते । टिम कातामा नेपाली टोलीका लागि संगिता मगर, सरु कार्की र निर्मला तामाङले स्वर्ण हासिल गरेका हुन् ।
५. लक्ष्मण तामाङ, कराँते (५५ केजी)
लक्ष्मण तामाङ कराँतेको कुमुते विधामा यसपटक पहिलो स्वर्ण दिलाउने खेलाडी हुन् । ५४ केजीमुनि तौल समूहमा बंगलादेशका प्रतिद्वन्द्वीलाई १–० ले हराएर उनले स्वर्ण जितेका थिए । बंगलादेशी खेलाडीसँगको कडा प्रतिस्पर्धापछि १ अंक जोड्दै लक्ष्मणले नेपाललाई स्वर्ण दिलाउन सफल भएको थियो ।
६. विप्लवलाल श्रेष्ठ, कराते (८४ केजीमाथि)
कराँतेको ८४ केजी माथिको स्पर्धामा उत्कृष्ट कमब्याक गर्दै विप्लवलाल श्रेष्ठ स्वर्ण जितेका हुन् । सेमिफाइनलमा उनले श्रीलंकाली खेलाडीलाई ८–० का स्कोर गर्दै टेक्निकल आधारमा पराजित गर्दै फाइनलमा पाकिस्तानी खेलाडीलाई ६–५ ले पराजित गर्दै स्वर्ण जितेका हुन् ।
कमल श्रेष्ठ तेक्वान्दोका अनुभवी खेलाडी भए प जित्न सफल भएका थिएनन् तर यसै पटकबाट थपिएको पुरुष एकल २३ देखि २९ वर्ष उमेर समूहको पुम्सेमा स्वर्ण जित्न सफल भएका छन् । कमलले भारतीय खेलाडीलाई ८ दशमलव २७० ले पछि पार्दै १३ औँ सागमा तेक्वान्दोबाट स्वर्ण जितेका हुन् ।
८. नवीन रसाइली, कराँते (६७ केजी)
कराँतेको पुरुष विधा अन्तर्गतका खेलाडी नविन रसाइलीले कराँतेको फाइट ६७ केजी तौल समूहतर्फ नविन रसाईलीले नेपाललाई स्वर्ण पदक दिलाएका हुन् । उनले पाकिस्तानका अमेद नसिरलाई ८–६ अंकले पराजित गर्दै स्वर्ण सुनिश्चित गरेका थिए। उनले समूह चरणमा बंगलादेशका मोहमदमाथि ८–२ अंकको सहज जित निकाल्दै फाइनलको यात्रा पक्का गरेका थिए ।
९.सुनिता महर्जन, कराँते (६८ केजी)
कराँतेको फाइटमा नेपालले ६ मध्ये २ स्वर्ण जितेको छ। जसमा करातेको फाइट महिला विधा अन्तर्गत सुनिता महर्जनले स्वर्ण पदक हात पारेकी थिइन् ।अन्तिम खेलमा सुनिता महर्जनले ६८ केजी तौल समूहमा नेपाललाई स्वर्ण दिलाएकी थिइन् ।
उनले फाइनलमा पाकिस्तानकी कुलसुनलाई ८–२ अंकले पराजित गरेकी हुन् । समूह चरणमा बंगलादेशकी मोरियम खातुनमाथि १०–२ को सहज जित निकाल्दै सुनिताले फाइनलको यात्रा पक्का गरेकी थिइन् ।
तेक्वान्दोको पुम्सेतर्फको २३ देखि २९ वर्ष महिला समूहमा पार्वती गुरुङले नेपाललाई स्वर्ण दिलाएकी हुन् । पार्वतीले ८ दशमलव २५० स्कोर गर्दै श्रीलंकालाई पछि पारेकी थिइन् ।
११. अनु अधिकारी, कराँते (५० केजी मूनि)
१३ औं सागको पहिलो दिनमा भएको महिलाकराते कुमुतेको ५० केजी तौल समूहमा अनु अधिकारीले स्वर्ण हात पारेकी थिइन् । त्यो पनि विपक्षीलाई १ अंक नदिई ।अनुले फाइनलमा श्रीलंकाकी डन टुउलुलाई ८–० हराउँदै नकआउट पारिदिइन् । अनुले सेमिफाइनलमा समेत बंगलादेशका खेलाडीलाई ८–० ले नकआउट गरेकी थिइन् । अर्थात् उनी विरूद्ध दुवै देशका खेलाडीले अंक जोड्न सकेनन् ।
अनुले नकआउट ०–८, ०–८ स्कोर ल्याई त्यो पनि निर्धारित समय भन्दा अगाडि खेल सकाएकी थिईन् ।
१७ देखि २३ वर्ष महिला उमेर समूहको स्पर्धामासीना मादेन तेक्वान्दोको पुम्सेमा स्वर्ण जित्ने पहिलो महिला खेलाडी हुन् । उनले ८ दशमलव १५० स्कोर गरेकी थिइन् । उनले भारतीय प्रतिद्वन्द्वीलाई पछि पारेकी थिइन् ।
१३. आयशा शाक्य, तेक्वान्दो पुम्से (२९ वर्ष माथि)
आयशा शाक्य पूम्से (कला प्रदर्शनी) बाट २ स्वर्ण हासिल गरिकी छिन् । आयशाले २ स्वर्ण आफ्नो सन्तानलाई समर्पित गरेकी छन् । आयशालाई खेलअघि ‘पहिला आफ्नो र देशको लागि खेलें अब देश र मेरा बच्चाहरूका लागि खेल्छु र मेरो बच्चाहरूका लागि भए पनि जित्नु पर्छ भन्ने लाग्छ’ भनेकी थिइन् ।
६ र २ वर्षे दुई सन्तानका आमा आयशाले नभन्दै आफ्नो अठोट पुरा गरिन् । १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग)मा तेक्वान्दोको स्वर्ण जितेर २९ वर्ष माथिको पुम्से (कला प्रदर्शनी) विधामा र संजिवकुमार ओझासँगको जोडी विधामा उनले स्वर्ण जितेकी हुन्।
स्वर्ण जितेको क्षण मैदानमै उनले आफ्ना श्रीमान दिपक विष्टलाई अंगालो हालेर निकै भावुक भएकी थिईन् । लगत्तै आयशाले आफ्ना दुई सन्तानलाई बोकेकी थिईन् ।
विवाह भएपछि अभ्यासमा अप्ठ्यारा झेल्नु पर्ने साथै आमा बनेपछि स्टामिना र शारिरीक अभ्यास घट्ने उनले महसुस गरेकी थिईन्। आफ्नो सानो बच्चालाई घरमा छोडेर प्रशिक्षण गर्दा, खेल खेल्दा बच्चाहरूलाई पीडा हुने पनि आयशाले महसुस गरेको बताइन्। ‘त्यसैले यो स्वर्ण म मेरो बच्चाहरूको लागि समर्पित गर्न चाहन्छु,’ उनले भनिन् । यसअघि भारतमा भएको १२औं सागमा आयशा रजत पदकमा सिमित थिइन्।
१४.अनुपमा मगर, कराँते (६८ केजी)
कराँतेको ६८ केजी महिला समुहमा अनुपमा मगरले नेपाललाई स्वर्ण दिलाइन् । अघिल्लो महिना दक्षिण एसियाली च्याम्पियनसिपमा रजतमा सीमित अनुपमा सागमा भने अनुपमाले तिनै ब्रान्दालाई हराएर फाइनलमा स्थान पक्का गरिन् र बलियो मानिएको प्रतिद्वन्द्वी पाकिस्तानी नर्गिस, जो जाकर्ता एसियाडकी पदक विजेता हराएर अनुपमाले स्वर्ण जितिएकी हुन् ।
१३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग)मा २९ वर्ष माथिको तेक्वान्दो पुम्से (कला प्रदर्शनी) विधामा आयशा शाक्य र संजिवकुमार ओझासँगको जोडी विधामा उनले स्वर्ण जितेका हुन् ।
टीम पुम्से यस पटकबाट तेक्वान्दोमा थपिएको विधा हो । तेक्वान्दोको महिला टीम पुम्सेको १७ देखि २३ वर्ष उमेर समूहमा नेपालले स्वर्ण जितेको छ । निकै प्रतिस्पर्धात्मक रहेको खेलमा नेपालले भारतीय टोलीलाई हराएको थियो ।पुम्से महिला टिमद्धारा निशा दर्नाल, स्वस्तिका तामाङ र सन्जिला तिमल्सिनाले ७ दशमलव ९८० स्कोर गर्दा भारतीय टोलीले ७ दशमलव ९७० स्कोर गरेको थियो ।
तेक्वान्दोको महिला टीम पुम्सेका२३ देखि २९ वर्ष उमेर समूहले पनि स्वर्ण पदक हासिल गर्न सफल भएका छन् । पुम्सेमा नेपाली महिला टोलीमा नीता गुरुङ, प्रशंसा क्षेत्री र सुशीला राईले ७ दशमलव ९२० अंक स्कोर ल्याउदै स्वर्ण जितेका हुन् ।
१८. काजल श्रेष्ठ, तेक्वान्दो (४६ केजीमूनि)
काजल श्रेष्ठले तेक्वान्दोको फाइट ४६ केजीमुनि तौल समूहबाट स्वर्ण जितेकी हुन्।उनले फाइनलमा पाकिस्तानकी सायद सिड्जा बटूललाई ५०–१४ अंकले पराजित गर्दै स्वर्ण जितेकी हुन्।पहिलो चरणमा उनले भारतकी राधा भाटीलाई ५०–३९ ले हराएकी थिइन् ।
वीरबहादुर महराले तेक्वान्दो फाइटको ६८ केजीमुनि तौल समूहमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दैउनले फाइनलमा पाकिस्तानका महम्मद फहिमलाई ४१–३६ अंकले पराजित गर्दै स्वर्ण हात पारेका हुन् ।उनले सेमिफाइनलमा भारतका पृथ्वीराज चौहानलाई पराजित गरेका थिए।
१३ औँ सागमा नेपाललाई स्वर्ण दिलाउने पहिलो महिला खेलाडी हुन् सोनी गुरुङ । ट्रायथलनको ७ सय मिटर पौडी २० किलोमिटर साइक्लिङ र पाँच किलोमिटर दौड पूरा गर्न सोनीले १ घन्टा १३ मिनेट ४५ सेकेन्ड लगाइन् । उनीसँगै प्रतिस्पर्धामा रहेका भारतीय र श्रीलंकाली खेलाडीले कडा टक्कर दिए पनि ३ विधामै सुरुबाटै उनले बनाएको अग्रता अन्तिम समयसम्म कायम रहँदा उनले स्वर्ण पदक हात पारेकी थिइन् ।
१३ औं दक्षिण एशियाली खेलकुद (साग) अन्र्तगत पोखरामा सम्पन्न भएको दुआथलन पुरुष तर्फ नेपालले स्वर्ण पदक जितेको थियो । हिमाल टमाटालेदुआथलन पुरुष प्रतिष्पर्धामा स्वर्ण पदक जितेका हुन् ।उक्त खेलमा नेपाल,भारत र श्रीलंकाका सहित ६ खेलाडी सहभागि थिए।
१३औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) माविजय सिञ्जालीले उसु थाउलोतर्फ नेपालका लागी सुखद सुरुवात गरेको थियो । विजय सिञ्जालीले थाउलोतर्फ छानछ्वानमा स्वर्ण जितेका हुन्। उनले सहभागी पाँच खेलाडीलाई पछि पारका थिए ।
विजयले फाईनलमा भने बंगलादेशका मोहमद ओमारलाई पछि पार्दै स्वर्ण हासिल गरेका थिए । उनी १२ औं सागको रजत पदक हुन् र
२३. सुस्मिता तामाङ, उसु (थाउलो)
१३औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) मा महिला उसु छानछ्वान तर्फ सुस्मिताले स्वर्ण पदक हात पारेकी हुन् । सुस्मिता तामाङले ९.४४ अंक ल्याएर स्वर्ण जितेकी हुन् ।सुस्मिताले बंगलादेश र श्रीलंकाका खेलाडीलाई पछि पारेकी थिईन् ।
सेनामा बन्ने सपना बोकेका दीपकहमाल असफलतापछि उसु सिक्न थालेका उनी उसुले १३ औँ सागमा स्वर्णधारी बनायो । उसुको थाउलोतर्फको नानक्वानमा उनले १९.३२ अंकसहति स्वर्ण जितेका हुन् । पहिलो अन्तर्रा्ष्ट्रिय स्वर्ण जितेका हुन् ।
सन्तोषी श्रेष्ठले महिला १० हजार मिटर दौडमा स्वर्ण जितेकी हुन्।श्रेष्ठले १३औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) मा एथ्लेटिक्समा खाता खोलेकी थिइन् ।दशरथ रंगशालामा भएको खेलमा उनले निर्धारित दूरी ३५ मिनेट ७.९४ सेकेण्डमा निर्धारित दूरी पूरा गरेकी थिइन् ।
उनले भारतीय खेलाडी कबिता यादवलाई पछि पारेकी थिइन् । भारतीय खेलाडी यादवले ३५ मिनेट ७.९५ सेकेण्डमा दूरी पूरा गरिन्। ०.०१ सेकेण्डको अन्तरमा भारतीय धाविकालाई हराउँदै सन्तोषीले नेपालका लागि स्वर्ण जितेकी हुन् ।
राजेश मगर नेपाललाई साइक्लिङमा दोस्रो स्वर्ण पदक दिलाउने खेलाडी हुन् ।पुरुष डाउनहिलमा राजेशले १ किलोमिटरको रेस एक मिनेट ५१ः१२४ सेकेन्डमा पूरा गर्दै साइक्लिङबाट स्वर्ण जिते ।
निस्मा श्रेष्ठले साइक्लिङबाट नेपाललाई पहिलो सहभागितामा नै स्वर्ण दिलाएकि थिइन । निस्मा डाउनहिल विधामा प्रतिस्पर्धा गर्ने एक्ली महिला राइडर हुन् ।
संगीताले राष्ट्रिय टोलीमा पर्ने बित्तिकै जकार्ता एसियाडको अनुभव बटुलिन् । १२ औँ सागको छनोटमा नअटाएकी संगीता १३ औं सागमा परिन्ेक्वान्दोमा। सागको पहिलो सहभागितालाई यादगार बनाउने क्रममा यिनले भारतकी खेलाडीलाई हराउदै स्वर्ण जित्न सफल भएकी हुन् ।
ललितपुरको सातदोबाटोस्थित तेक्वान्दो हलमा तेक्वान्दोको ग्योरोगी ८७ केजी तौल समूहमा सक्षम कार्कीले स्वर्ण जितेका हुन् । उनले स्वर्ण जित्दा अर्को कीर्तिमान पनि बनेको थियो । त्यो थियो, सागमा नेपालले स्वर्ण संख्या १ सय र्पुयाएको कीर्तिमान । सन् २०१४ को एसियाली खेलुकदमा सहभागिता जनाएका सक्षम अघिल्लो सागका रजत बिजेता हुन् ।
३०) किरण सिंह बोगटी एथलेटिक्स (म्याराथन)
१३ औं सागमा एथ्लेटिक्सले ३ स्वर्ण जित्यो । किरणले २ घण्टा २१ मिनेट १७ सेकेण्डमा दूरी पार गर्दै स्वर्ण जितेका हुन् ।पुरुष म्याराथनमा स्वर्ण जित्न नेपालले २४ वर्ष कुर्न प¥यो ।
३१) संगीता धामी (कुस्ती)
संगीता धामीले कुस्तीमा नेपाललाई पहिलो स्वर्ण दिलाइन् संंगीताले ५५ केजी तौल समूहमा बंगालदेशकी रिमी सरकारलाई पराजित गरेकी हुन् । उनले स्वर्ण पदक आफ्नी आमालाई समर्पित गरिन् ।
३२) गौरिका सिंह पौडी (२ सय मिटर ब्याकस्ट्रोकमा)
१३ औं सागमा नेपाली खेलाडी गौरिका सिंहले गर्विलो प्रदर्शन गरेकी छन् । गौरिकाले ४ वटा स्वर्ण जितेर सबैभन्दा धेरै स्वर्ण जित्ने नेपाली तेक्वान्दो खेलाडी दीपक बिष्टसँग रेकर्ड बराबरी गरेकी छन् . साथै उनले एउटै सागमा चार स्वर्ण जितेर नयाँ रेकर्ड पनि कायम गर्न सफल भएकी छन् .
गौरिकाले सय मिटर फ्रिस्टायल, २ सय मिटर फ्रिस्टायलय, २ सय मिटर ब्याकस्ट्रोक र ४ सय मिटर फ्रिस्टयाल तर्फ स्वर्ण पदक हात पारेकी ह’न् . गौरिकाले !३औं सागमा ४ स्वर्णसहित २ रजत र ३ कास्य गरी ( पदक हात पारेकी छन् . ५) मिटर र सय मिटर ब्याकस्ट्रोमा भने उनले रजत जितेकी छिन् . आप्mनो रेकर्ड तोडेको हेर्न चाहने गौरिकाले अबको लक्ष्य नेपालका लागि ओलम्पिक पदक जित्न’ रहेको बताएकी छन् ।
३३) गोपीचन्द्र पार्की एथलेटिक्स (५ हजार मिटर)
१३ औँ दक्षिण एसियाली खेलकुद सागमा एथ्लेटिक्सको प्रदर्शन उच्च रह्यो ।एथलेटिक्सबाट ३ पदक मध्ये गोपीचन्द्र पार्कीले १ स्वर्ण हात पारेका हुन् ।५ हजार मिटरको निर्धारित दूरी १४ मिनेट ५४ः२० सेकेन्डमा पूरा गर्दै प्रथम स्थान हासिल गरका थिए । उनले भारतका सुनिल दवारलाई करिब १ सेकेन्डले पछाडि पारेका थिए
३४) सुवास तामाङ गल्फ (पुरुष व्यक्तिगत स्पर्धा)
सुवास तामाङले सागमा नेपाललाई दोहोरो स्वर्ण दिलाएका छन् । गल्फको एकल र टीम इभेन्टमा स्वर्ण हासिल गर्दै कम उमेरमा दोहोरो स्वर्ण जित्ने इतिहास रचेका हुन् । उनले बंगलादेशका मोहम्मद फरहादलाई ८ स्ट्रोकले पछि पार्दै स्वर्ण हासिल गरेका हुन् ।
३५) शुक्र बहादुर राई, टंक बहादुर कार्की, सुरज तामाङ, निरज तामाङ गल्फ (पुरुष टिमइभेन्ट)
नेपालले टीम इभेन्टतर्फ पनि स्वर्ण पदक पक्का हात पारेका छन् । टीम इभेन्टमा नेपालबाट सुवासतामाङ,शुक्रबहादुर राई, टंकबहादुर कार्की र निरज तामाङ प्रतिस्पर्धा गरेका थिए ।
३६) विकास थापा भारोत्तोलन ( ८९पुरुष केजी तौल)
विकास थापा पुरुष भारोत्तोलनको ८९ केजी तौल समूहमा स्वर्ण बिजेता खेलाडी हुन् । विकासले स्न्याचमा १ सय २३ केजी र क्लिन एन्ड जर्कमा १ सय ४६ केजीसहित कुल २ सय ६९ केजी तौल उचालेका थिए ।
३७) गौरिका सिंह पौडी(२ सय मिटर फ्रीस्टायल)
३८) सञ्जु चौधरीले भारोत्तोलन (५९ केजी)
भारोत्तोलनको महिला ५९ केजी तौल समूहमा स्वर्ण पदक जित्ने खेलाडी सन्जु चौधरीले स्न्याचतर्फ ७४ केजी र क्लिन एन्ड जर्कमा ९७ केजीसहित कुल १ सय ७१ केजी तौल उचाल्दै स्वर्ण हात पारेकी थिइन् । नेपाली भारोत्तोलनकै इतिहासमा यो मात्र दोस्रो स्वर्ण हो । महिलातर्फ भने भारोत्तोलनमा स्वर्ण जित्ने सन्जु पहिलो खेलाडी हुन्।
३९) जुनी राई उसु (५६ केजी)
जुनी राईले उसुको सान्सौ (फाइट) ५६ केजी तौल समूहमा नेपाललाई स्वर्ण दिलाएकि हुन् ।जुनीले श्रीलंकाकी मदुमालीलाई २–० ले हराउँदै स्वर्ण पदक पक्का गरेकी थिइन् । उनले पहिलो चरणमा भारतीय खेलाडी विद्यावती चानुलाई २–० ले हराएकी थिइन् । उसुको सान्सौमा सन् २००६ पछि यो नेपालको लागी स्वर्ण जित्ने जुनी पहिलो खेलाडी हुन् ।
४०)भुपेन श्रेष्ठ तेक्वान्दो (८७ केजी)
पुरुष तेक्वान्दोमा नेपालका भूपेन श्रेष्ठले स्वर्ण जितेका थिए । ग्योरोगीको ८७ किलोमुनिको तौल समूहमा भूपेनले भारतका अक्षय होडालाई २९–२६ अंकले पराजित गर्दै स्वर्ण हात पारेका थिए।
४१)नीमा घर्तीमगर उसु (थाउलो नान्दौ)
निमा घर्तीमगरसागमा लगातार दुई स्वर्ण जित्ने खेलाडी हुन् । १६ वर्षकै उमेरमा उनले अघिल्लो सागमा नेपाललाई स्वर्ण दिलाएकी थिइन् ।उसुको नानछ्वानमा उनले कुल २० मा १८ दशमलव ९१ अंक स्कोर गरेकी थिइन् ।
४२) लक्ष्मी श्रेष्ठ साइक्लिङ (क्रस कन्ट्री)
महिला क्रस कन्ट्री स्पर्धामा नेपालको लागीलक्ष्मी मगरले स्वर्ण जितेकी हुन् ।साइक्लिङमा लक्ष्मीले क्रस कन्ट्रीको ४ किलोमिटरमा स्वर्ण जितेकी हुन् । लक्ष्मीले निर्धारित दूरी १ मिनेट २०ः२० सेकेन्डमा पूरा गरेकी थिइन् ।
४३) बुद्धिबहादुर तामाङ साइक्लिङ (क्रस कन्ट्री)
४४) गौरिका सिंह पौडी (१ सय मिटर फ्रीस्टायल)
४५) मिनु गुरुङ बक्सिङ (४८ केजी)
१३औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागको बक्सिङमा नेपालको २० वर्षपछि बक्सिङमा पहिलो स्वर्ण मिनु गुरुङले दिलाएकी थिइन् ।गुरुङले ५४ केजी तौल समूहमा भारतीय बक्सरलाई पराजित गर्दै नेपाललाई १ स्वर्ण थपेकि थिइन्।
४६) भूपेन्द्र थापामगर बक्सिङ (६४ केजी)
पुरुष बक्सिङको ६४ केजीको फाइनलमा नेपालका भूपेन्द्र थापामगरले सागको पुरुष बक्सिंगमा २० वर्षपछि पहिलो पटक नेपाललाई स्वर्ण पदक दिलाउन सफल भएका हुन् । उनले भारतका मनिष कौशिकलाई अंकको आधारमा हराउँदै साग बक्सिंगमा २ दशक लामो स्वर्णको खडेरीलाई समाप्त पारेका छन् ।
४७) पुनम श्रेष्ठ जुडो (७८ केजी)
Judoka Punam Shrestha celebrates after winning gold medal in Lalitpur on Monday, December 9, 2019. Photo: THT
१३ औं साग अन्तर्गत जुडोको ७८ केजी तौल समूहमा पुनम श्रेष्ठले स्वर्ण जितेकी छन् । प्रतिस्पर्धामा उनले सुरूमा श्रीलंकाकी खेलाडीलाई हराएकी थिइन् त्यसपछि उनको खेल भारतीय खेलाडीसंग थियो। भारतीय खेलाडीलाई हराएपछि उनको फाइनल भिडन्त बंगादेशकी फरिना खानोमलाई पछि पार्दै स्वर्ण हासिल गरिन् ।
४८) देविका खड्का जुडो (५२ केजी)
देविका खड्काले जुडोबाट नेपाललाई पहिलो स्वर्ण दिलाएकी हुन् । जुडोकी देविका खड्काले महिला ५२ केजीमा स्वर्ण जितेकी हुन्। उनले फाइनल भिडन्तमा बंगलादेशकी जेरिन ताहामिदालाई पराजित गरेकी हुन्। बंगलादेशी खेलाडीले ३ वटा फल गरेर डिस्क्वालिफाइ भएपछि खड्काले स्वर्ण जितेकी हुन्।
४९) पुष्पा भण्डारी (एथ्लेटिक्स)
पुष्पा भण्डारीले १३ औं सागमा महिला म्याराथनतर्फ स्वर्ण जितिन् । उनी सागमा म्याराथनतर्फ स्वर्ण जित्ने पहिलो महिला बन्न पुगिन् । राष्ट्रिय कीर्तिमानसहित स्वर्ण जित्ने क्रममा पुष्पाले २ घण्टा ५० मिनेट ११ सेकेण्डको टाइमिङ निकाल्दै स्वर्ण हात पारेकी हुन् ।
५०) सनिल शाही बक्सिङ (६० केजी)
बक्सिङको पुरुषतर्फको ६० केजी तौल समूह अन्तर्गत नेपालका सनिल शाहीले स्वर्ण जितेका हुन् ।शाहीले भारतका बक्सर वीरेन्दर सिंहलाई अंकका आधारमा हराएर स्वर्ण जितेका हुन् ।
५१) फुटबल टिम
बिकेश कुथु, मिक्चेन तामाङ, बिकाश खवास, अनन्त तामाङ, अभिशेक रिजाल, सुनिल बल, नितिन थापा, बिक्रम लामा, तेज तामाङ, सुजल श्रेष्ठ, सुमन अर्याल, छिरिङ गुरुङ, राजिव लोप्चन, हेमन्त थापामगर, रेजिन सुब्बा, राजेश परियार, शेशेहाङ्ग लिम्बू, प्रिजेन तामाङ, अर्पन कार्की, दिप कार्की (पुरुष फुटबल टिम)
भुटानलाई २–१ गोलअन्तरले पराजित गर्दै नेपाल १३ औँ साग फुटबल च्याम्पियन बनेको छ । नेपाललाई जिताउन अभिषेक रिजाल र सुनिल बलले १–१ गोल गरे । १६ औँ मिनेटमा अभिषेकले पहिलो गोल गर्दै नेपाललाई अग्रता दिएका थिए । तर भुटानका कप्तान चेन्चो ग्यालसेनले ३६ औँ मिनेटमा गोल गर्दै खेललाई बराबरी बनाए । नेपालका तर्फबाट ५३ औँ मिनेटमा सुनिलले गोल गरेपछि नेपाल विजयी बन्यो ।नेपालले लगातार दोस्रो पटक साग फुटबलमा स्वर्ण पदक जितेको छ
Prevए डिभिजन लिगमा एक टिम घटुवा
राष्ट्रियसभाको निर्वाचन माघ ९ गतेNext